Article submitted by: minkyaw thuyein on 17-Feb-2013
မြန်မာနိင်ငံ လုပ်ကြံခံရခြင်း ( ၂ )
ဦးပြောင်ကြီး ဖင်ပြောင်ခြင်တယ် ထင်တယ် ပေါ့ပေါ့ ပြောနေတယ် ၊ ဒါမျိုးတွေ ကြားဘူးပေါင်းများနေလို. ကျုပ်ကတော့ အထင်လဲမကြီးဘူး ။ လုပ်ကြည့်စမ်းပါ လို.လဲ သူခိုးကို ဓါးရှိုး မကမ်းဘူး။
ကျုပ်ပြောခဲ့ဘူးပေါင်းလဲ များပါပြီ ၊ ကိုရင်ကြီးပြောတာလေးကိုသဘောကျလွန်း
လို. ထပ်မံဖေါ်ပြပြီး ကိုယ့် ရှုဒေါင့် တမျိုး ကနေ လေ.လာမိတာကို အများတကာ
သတိပြုမိအောင် တင်ပြလိုက်ခြင်တယ် ၊ ကိုရင်ကြီး သိတဲ့အတိုင်း ပါလီမန်
်လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြံ့ဖွံပါတီ၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလယ်တွေနဲ့လူမျိုးစုနိုင်ငံရေး
ပါတီ တွေ အသီးသီးရှိကြတယ်။ သူတို.အားလုံးနောက်မှာလဲ သူတို.အသီးသီး
ရဲ့စစ်တောင်ပံ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ အသီးသီးရှိကြတယ် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ/တပ်မတော်နဲ.အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲထားကြတဲ့ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ.တွေဟာ ဒီနေ.အထိ သီးခြားကိုယ်ပိုင် တပ်တွေအဖြစ်နဲ.လက်နက်ကိုင်ထားကြ
တုန်းဘဲ ရှိတယ် ၊ အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်.နေကြတယ် ၊ ကချင် လိုဘဲ ရရင်ရ မရရင်ချဆိုတဲ့စိတ်လဲသူတိုမှာရှိနေတုန်း ဘဲလို. ခန်.မှန်းလို.ရတယ် ။
ဒါဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ နိုင်ငံသားတို.ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို
ချိန်းချောက်နေတုန်းဘဲ ဆိုတာ တွေ.ရတယ် ၊ နောက် ၂ နှစ်နဲ့လဲ ပြသနာပြေ
လညစေလိမ့်အုံးမယ်မဟုတ်ဘူး ၊ နောက် အနှစ် ၂၀ မကြာရင် တော်သေး
တယ်လို.ဘဲပြောတော့ ။ ကချင်အရေးကိုရည်ညွှန်းပြီး ဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံတော် ဖွံဖြိုးတိုးတက် မှုတွေကို အဟန်.အတားအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာရှိတယ်လို.ပြောဘူးတယ် ။
မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးဟာ သေသေချာချာတွေးရင် ပေါ့ပေါ့ မဟုတ် မျက်တောင် ခတ် မခံဘူး၊ ခတ် တဲ့လူက အရှုံးဘဲ လို.မြင်တယ် ။ ဥပါဒ် ဒဏ်ကြောင့် ဥပါဒ်
ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားလို တော့ အကြောက်လွန်လို.၊ စိုးရိမ်လွန်လို.ဖြစ်ရတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းက တပ်မတော်ကတန်ဘိုးရှိတဲ့အသက်တွေများစွာပေး ထိမ်းထား
နိင်ခဲ့တယ် ၊ တပ်မတော်က ဘာကြောင့် ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်
နားလည်သူနဲပါတယ် ၊ ဒီအသက်တွေရဲ့တန်ဘိုး တွေတပ်မတော်ရဲ့တန်ဘိုးတွေ
ကို ကျုပ်တို.ဆီက လူ ဆိုတာတွေက နားလည်ကြရဲ.လား လို.မေးခြင်တယ် ။ ကျန်စစ်သား ကယ်တာကို ပစ်မှားတဲ့ စောလူးမင်း ငရမန်ကန်းလက်မှာ သေရ
တာ ရှိဘူးတယ် ။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စောလူးတွေ တပုံကြီး ။ ကျန်စစ်သားဆိုတာ ရှိသင့်တယ် ။
သတိဆိုတာကတော ပိုသည်မရှိ လိုသည်သာရှိသည် ဆိုတဲ့ အတိုင်း သတိပေး
သင့်တာတွေကို တော့ ပေးရမှာဘဲ ။ လောကမှာ မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူး ၊မဖြစ်သေး
တာ သာရှိတယ် လို.လူကြီးတွေ ပြောဘူးတယ် ၊
ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေကိုလေ့လာရင် ဘယ်သူတွေ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေ
လုပ်ပြီး ဘာတွေမှန်ခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေမှားခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို ရေးချပြီး နှိုင်း
ယှဉ်ကြည့်ဘို.လိုလိမ့်မယ်မှာဘဲ ၊ ချီးကြုးစရာတွေ ကဲ့ရဲ့စရာ တွေ လူတိုင်းမှာရှိ
တယ်၊ ဒါတွေကိုနောင်လာ နောင်သားတွေ သိအောင်၊ နမူနာယူ ၊သင်္ခဏ်းစာယူ
နိင်အောင် ဖေါ်ပြရမယ်၊ လောကမှာ အမှားမလုပ်ဘူးတဲ့ လူ ဆိုတာ မရှိ သ လောက်ဘဲ ထင်တယ် ။ ဒါကြောင့်တော့ လူဆိုတာ အမှားလုပ်နိင်ခွင့်ရှိတယ် -ဒါဟာလူ.အခွင့်အရေးလို. တော့ဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ၊အမှားလုပ်
ဘူးမှ အမှန်ကိုလဲ သိမယ် ။ အမှားကိုအမှန် ယူဆသူတွေ ရှိသပေါ.လေ ။
အထူးသဖြင်. ဆီလိုအပေါက်ရှာ အပြစ်အနာအဆာတွေရှာကြံပြောကြမယ်ဆိုရင်
။ ပြောစရာတွေကတော့ ဆုံးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒီပြောစရာတွေကိုဘဲကောင်း
တဲ့ဘက်ကကြည့်ရင် အကောင်း ၊ မကောင်းတဲ့ ဘက်ကကြည်.ရင် မကောင်းတာ
ဘဲ မြင်ကြလိမ့်မယ် ၊ အဆိုးမမြင်ရင်တော်သေးတာပေါ.။ ဥပမာအားဖြင့် မျက်စေ
စွေတယ် ၊ ပါးရွဲ.တယ် ၊ နားတဖက် မြင့်တယ် ၊ ပေါင်တန်တိုတယ်လက်တန်ရှည်
တယ် စသဖြင့် ပေါ့လေ ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် သိဒိတ္ထ ဂေါတမ တောင် မှားပြီးမှ အမှန်ကိုရောက်ရပါတယ် ။ တခုတော့ရှိပါ တယ် သူများ ပြောလို.မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မှားမှန်းသိပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အချိန်မနှောင်းမီ ပြန်လည် ပြုပြင်နိင်တာဟာ အကောင်းဆုံးမို.ဂုဏ်ပြု ချီးကျူးရမှာပါ ။
တဆက်ထဲထည့် ပြောရရင် ရိုးရိုးလူ သာမန် သာ ဆိုရင် ကိုယ့်မယား ကိုယ်သား
ကို တာဝန်မယူဘဲ ပစ်သွားသူလို့ အပြစ် ပြောလို.ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဒါက ဥပမာ ပြောတာပါ ။ ဆိုလိုတာက သမိုင်းကို သိတဲ့ အခါ ၊ တနည်းအားဖြင် မိမိ့
ကိုယ် မိမိ ပြန်လည်စမ်းစစ် ဘို. လိုအပ်တယ် ၊ လိုတိုး ပိုလျှော့တွေ ညှိယူရမယ် ဆိုတာဘဲ ၊ ကိုယ် ဘာပြုလို.ဘာပြင်ရမယ်ဆိုတာ သိအပ်တယ် ၊ သတိ ထားရ
မယ် ၊ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်သိရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲကြည်.ပြီး ကိုယ်သာ
လျှင် အလှ ဆုံးထင်နေလို. လဲ မဖြစ်သေးဘူး ၊ မနှင်းဖြူ တယောက်က ပိုလှပါ
တယ်လို. မှန်ကဆိုလိုက်တော့ မနှင်းဖြူ ကို သေအောင် သတ်ခိုင်းပေမဲ့ သေနေ့
မစေ့လို. မသေရဘူးဆိုတဲ ပြုံ့ပင်လေးဟာ မှတ်သားစရာဘဲ ။
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကို လေ.လာရင် မင်းအဆက်ဆက် ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မြန်မာတွေ မညီမညွတ် ရှိခဲ့ကြတာတွေ.ရတယ် ၊ ဘယ်သူကြောင့်လို. ရိုးစွတ်လို.မရပါဘူး။ နောက်ဆုံးမတော့ အုပ်ချုပ်သူညံ့ဖျင်းလို. ဘဲ တဲ့ ၊ အအုပ်ချုပ်ခံတွေ တာဝန်ဘာမှ မရှိတော့ဘူးလား ၊ နိုင်ငံတခုမှာ တာန်မဲ့နိုင်ငံသားတွေပြည့်နေရင် ဒီနိုငံငံဟာ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ ။ မြန်မာတွေကို တနိုင်ငံထဲက ၊ တနိုင်ငံ ထဲသားတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုပန်းခဲ့ တဲ့ ဘုရင်တွေ ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလဲ တွေ.ရပါ တယ် ၊ ဒါပေမဲ အဒွန်.မရှည်ခဲ့ ဘူးမဟုတ်လား ။ ဖြစ်ချိန်တန်လို.ဖြစ် ပျက်ချိန်တန်လိုပျက် ဆိုတာဟာ တာဝန်မဲသူတွေ ပြောတဲ့
စကားပါ ။ နောက်လူက ဆက်ပြီးမထိမ်းနိုင်လို.ဘဲပေါ့ ကိုရင်ကြီးရဲ့။ မြန်မာ စကားကိုက “ တကျောင်းတဂါထာ တရွာတပုဒ်ဆန်း" လို. ဆိုတယ်မဟုတ်လား?
ဘုရားပုထိုးစေတီတွေတောင် နောက်လူက မထိန်းသိမ်းရင် တောင်ဘို.မြေပုံ ဖြစ်တတ်တယ် ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၊ အမြင်အမျိုးမျိုးကြောင့် ပယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့် အခုချိန်ထိ မြန်မာတနိုင်ငံ ထဲနဲ.မြန်ာမာအားလုံး တနိင်ငံထဲသား ဆိုတဲ့ ဒီအကြံ
ဟာမအောင်မြင်နိုင်သေးဘူး ဆိုတာဝန်ခံရလိမ့်မယ် ။ ရှေ.အလားအလာ အနာဂါတ်ကတော့ လူ အနေနဲ ပြောဘို. ခန်.မှန်းဘို.ခက်ပါတယ် ။
“ အာဏာရှိသူကိုဝိုင်းပြီးဖင်ရက်ဆားဖြူးလုပ်ချင်သူ အချိန်မစီးသူတွေများပြီး အဲဒီလူများက နေရာကောင်းရ သွားကြတာ ခေတ်အဆက်ဆက်ဆိုရမယ်။” ဒါ မျိုးတွေဟာ နိင်ငံ တကာမှာ ထွန်းကားနေတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ တွေ ဆိုတာကို တွေ.ရတယ် ၊ တိုးတက်မှုတွေရဲ.အဘိုးဆာနားအချို.ဆိုရင်လဲ မမှားဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာ ဒါမျိုးတွေကို ဘောင်အတွင်းသွင်းပြီး လက်ခံနေတယ်ဆိုတာကို တင်ပြဘူးတယ် ။ သူခေတ်နဲ.တော့သူတွင် ကျယ်ဆိုတာ ဒါဘဲပေါ့ ၊ “ ကိုယ့်လ"ူ
ဆိုတာလဲ ဒါဘဲ ၊ မြန်မာတွေဟာ သာကီဝင်မျိုးတွေလို.ဆိုတယ်မဟုတ်လား၊
ကိုယ်အမျိုးကိုယ် စောင့်ရှောက်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေ လေ။ ညာတကာနဉ္စ သင်္ဂဟော
ဆိုတာနဲ့လဲ အညီမို. ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး ။ ဒါကြောင့်လဲ တချိန်က “ ကြူပင်ခုတ် ကြူငုတ်မကျန်ရ - ဆွေစဉ် ၇ ဆက် မျိုးစဉ် ၇ ဆက် ” သုတ်သင်ပစ်
်တာ လိုအပ်လို.ဘဲ ၊ ဆိုးတော့ မဆိုးဘူး ၊ “
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးညီညွတ်ရေးပျက်ဆီးတာ” ရှိခဲ့သလို နိုင်ငံ တော်တွေ ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာတွေလဲ ရှိ တယ် ၊ ဒီနေရာမှာ ကျုပ်တို.ခေါင်းဆောင်တွေကို ဆရာကြီးတွေလုပ်နေ တဲ့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို.၊ အင်္ဂလိပ်တို.ရဲ့ အတိတ်
သမိုင်းရော ပစ္စုပန်သမိုင်းတွေကိုပါ လေ့လာဘို.လိုမယ် ၊ ဘိုင်ဘယ် လေ့လာရင်
အစ္စရေးနိုင်ငံ(ဂျူး ) အကြောင်းသိမယ် ၊၊ ကိုယ်လိုခြင်သလိုသာ ဆွဲပေတော့ ။
ဒီမိုကရေစီတွေ လူ.အခွင်.အရေးတွေ ဆိုတာ စာအုပ်ထဲက စားလုံးတွေ ဘဲဆိုတာတွေ.ရလိမ့် မယ်။ သူတို. ဟာ ဘယ်လူ ကိုမှ သောက်ဂရူမစိုက်ဘူး ပေါ့၊ ကမ္ဘာရပ်ရပ်မှာ လူတွေ သန်းနဲ.ချီပြီး ထွက်လာ စစ်ဆန်.ကျင် ရေး ဆန္ဒပြကြတာတွေ ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖေါက် စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျုးလွန်သူတွေကို သိပါရက်နဲ့ အမေရိကန်ဖြစ်နေလို. အင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေလို. ဥရောပက အလိုမတူသော်လဲ ပါနေလို. ဘာမှ မလုပ်နိင်ဖြစ်ရတဲ့ ကမ္ဘာ.အဖွဲ.အစည်းကြီးဆိုတာက ကမ္ဘာကြီးက မြန်မာအပါအ၀င် အခြားသူတွေကို ၀ိုင်းပြီး မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သားမယား ပြုခံရတာတွေဟာ တရားတယ် မျှတတယ်လို.ထင်နေ လက်ခံနေသူတွေဟာ လူတွေ လူ စိတ်ရှိသူတွေလို. ပြောမလား ? ကိုရင်ြကီး
တိုင်းပြည်ကို တကယ်ဘဲ ညီညွတ်စေခြင်သလား ဆိုတာအမေးလွယ်သလောက်
အဖြေရကြပ်တဲ့ မေးခွန်း ဘဲ ၊ ဘယ်သူတွေ ညီညွတ်ခြင်ကြသလဲ ၊ ဒီဗိုက်-အင်ရုး(လ်)- သွေးခွဲအုပ်ချုပ်တာ နေရာတကာမှာရှိတယ်၊အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား
ထဲကလူတွေရဲ. လက်သုံးစံနစ် ဆိုတာကို မမေ့ကောင်းပါဘူး ကိုရင်ကြီး၊ အအုပ်
ချုပ် ခံတွေ ၊ တတောင်းစားတွေ ဖက်ခွက်စားတွေ စာမတတ် ပေတတ် ကိုယ်
အမည်ကိုယ် ကြက်ခြေခတ် ပြီ်း လက်မှတ်ထိုး ကြသူတွေ အသုံးချခံတွေ ကောင်းစားတုန်းက ကောင်းစားခဲ့တာဘဲ မဟုတ်လား ။ ဒီလို.ပြောတော့လဲ မကောင်းပြန်ဘူး အမှန်ဘဲ ။
ကိုရင်ကြီးက “ဗုဒ်ဓဘာသာတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ရမှာတောင်လန့်လောက်အောင်များတယ်ဗျ”။ ဆိုလေတော့၊ ကျုပ်ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံကို အနော်ရထာမင်းစော ဗုဓ္ဒဘာသာ ယူလာတာနဲနဲစောများသွားသလားလို.ထင်မိ တယ် ၊ အနော်ရထာ ခမျာလဲ အသေစော သွားခဲ့တယ်လေ၊ ကျွဲခတ်တယ်ဆိုလား ကြပ်ခွဲတယ်ဆိုလား
ကျွဲနတ်ကိုးကွယ်သူတွေက ဖြောင်လိုက်ကြတာဆိုလားဘဲ ၊ သိပ်တော့မရှင်းဘူး၊ ။
မြန်မာတွေ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်လာတော့ စိတ်ထား နူးညံ့သိမ်မွေ.လာတယ်ဘဲ ပြောရမယ် ၊ပျောညံ့လာတယ် လို.ဆိုရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာပုဂိုလ်တွေ ဘုရားဆုပန်တွေ ဘုရားဖြစ်မဲ့ အုတ်ခဲတွေ အရာရာကို ကွဲကွဲပြားပြား မမြင်နိုင် ဝေခွဲမရ ကိုယ်.ဟာကိုယ် အမြင်ရှုတ်နေကြတာ ၊ မကြာခင်ကဘဲ ထည့် ပြောခဲ့သေး တဲ.( ဆူပါစတေးရှင်း) အယူသီးမှူတွေ ၊ (အိတ်စတွင်း(မ)ဇင်း) အစွန်းရောက်မှူတွေ ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြ ရ တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဟာကို မသိကြရင် နိဗ္ပာန်ရောက်ဘို.တော့ မလွယ်သေးဘူး ။ သတ္တ၀ါတခု ကံတခုလို.ဆိုထားတော့ မသိရင် မသိသူတွေရဲ့တာဝန်ဘဲ ၊ သူတို.ထိုက်နဲ့ သူတိုကံလို.ဘဲ ဆိုရုံ ဘဲ ပေါ့ ။
၀မ်းနဲစရာက မြန်မာတွေ အမြင်မှန်ဘယ်တော့ရကြမလဲဆိုတာဘဲ ၊ လေးသင်္ချေနဲ့
ကမ္ဘာတသိန်းဆိုရင်တော့ လဲ မစွန်သေးဘူး ၊အကောင်းကိုမျှော်လင့်တယ်
ဆိုတာ မျှော်လင့်ကောင်းပါတယ် ၊ အကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်တွဲ နေလေတော့ ဘယ်ဟာက အရင်ရောက်လာမှာ ဘယ်ဟာက နောက်ရောက်လာမှာဘဲ ကွာလိမ့်လိမ်မယ် ။ ဘာဘဲ လာလာ ကိုယ်က အသင့်ဖြစ်နေဘို.က အဓိက အရေးကြီးတယ် ။
အစိုးရကောင်း တခု ရဘို.ပြည်သူတွေကောင်းဘို. လိုတယ်လို. ဒီကပြောခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်းမနဲတော့ဘူး၊ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူထဲ လူတွေကို ပြည်သူတွေက ရွေးတာ ။ ၂၀၀၈ ခု ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်မှာ ပြဌာန်းတဲ့ ပြည်သူ.ကိုယ်စား
လည်ဖြစ်ထိုက်သူ အရည်အချင်းကိုမြှင့်တင်ရမယ် ၊ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူရဲ့ အရည် အချင်းကိုလဲ မြှင့်တင်ရလိမ်.မယ်။ အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူကိုအရည်အချင်း
ပြည့်စုံတဲ့ပြည်သူ တွေက ကိုယ်စားလည်အဖြစ် မရွေးချယ်ဘဲ ပုဂိုလ်စွဲ - စွဲနေ
သမျှ ကတော့ ကိုယ်နဲ.တကွ ပြည်သူတွေရော နိုင်ငံပါ နစ်နာဘို.ဘဲ ရှိတယ်
ဆိုတာ လက်တွေ. ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူတွေကို နားလှဲ.ပြီး ပါးရိုက်တတ်တဲ့ အလုပ်မျိုးဖြစ်လေ
တော့ ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက်က ကိုယ့်ကိုပြန်ချောက် နေတာဖြစ်နေတယ် ။ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် ရင့်ကျက် ပြည့်ဝနေရင် ကိုယ်မွေးတဲ့ မျောက်( ကိုရွေးတဲ့ ပြည်သူ.ကိုယ်စားလည်) က ကိုယ့်ကိုပြန်ချောက်/ ပါးရိုက်တာမျိုးလဲဖြစ်မယ် မထင်ဘူး ၊
ကိုရင်ကြီးကလဲဗျာ ၊ ကိုယ်ကိုကို.လဲ သိပ် မနှိမ့်ချစမ်းပါနဲ ၊ ခေါင်းပေါ်တက် သေးပေါက် ချီးပါးသွားလိမ့်မယ်၊ ကိုယ့်လောက်မှ မတတ်တဲ့ ကောင်တွေ တပုံ
ကြီးဆိုတာ အထင်ရှားကြီးရှိတာ သိသားနဲ့.၊ အကြံပေးပုဂိုလ် ခန်.မှဘဲလား ၊ အကြံပေးအဖွဲ.ထဲ ပါမှဘဲတဲ့လား၊ တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုး ကို ချစ်တဲ့ ၊ တိုင်းချစ် ပြည်ချစ်တွေ မျိုးချစ်တွေဟာ လွှတ်တော်အပြင်ကနေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အပြုသဘောနဲ.အကြံပြုနိုင်တာ ဘဲ ၊ သမတ ကိုယ်တိုင်ဆီဖြစ်စေ ၊ လွှတ်တော်
ဥက္ကဌဆီဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဆီဖြစ်စေ ။ အနီးဆုံး သံရုံးကတဆင့် ဖြစ်စေ ၊ အင်တာနက် ၀က်စိုက် ကနေဖြစ်စေ လက်မှတ်ထိုး စာရေး မိတ္တူ ပို.နိင်တာ သိသားနဲ့. ။
ကိုရင်ကြီး ကိုယ်တိုင် မကြာခဏပြောဘူးသလို တန်ရာ တန်ရာဘဲ ပေါ့ မဟုတ်
ဘူးလား။ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန် တာကို ကိုယ်ရလိမ့်မယ် ဆိုတာ ယေဘုံယျ အားဖြင်
အများက လက်ခံထားတယ် ။ သိကြားမင်းကျွဲယောင် ဖန်ဆင်းပြတာတောင် ဂျိူကားတယ် လို.ပြောသူဟာ မြန်မာ တဲ့ ။